Mogadishu Journal » Mesut Özil Oo Diiday £ 5m Oo U dhaqaaqaye Saudi Arabia’s Al-Nassr
Kooxda Sacuudi Carabiya Al-Nassr ayaa 5 milyan oo ginni ku dalbatay saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal Mesut Özil, laakiin ciyaaryahanka reer Jarmal ayaan xiiseyneynin heshiiska.
Özil, oo laga reebay safka Gunners ee Europa League, ayaa dhowr jeer ku celceliyay inuu doonayo inuu sii joogo Emirates Stadium isla markaana uu u dagaallamo booskiisa kooxda, in kasta oo Arsenal ay dooneyso inay ka fiirsato joojinta qandaraaskiisa.
In kasta oo uu fursad u leeyahay inuu u ciyaaro si muuqata oo caato ah, Özil wuxuu umuuqdaa inuu go’aansaday inuu sii joogo. TyC Sports 'César Luis Merlo ayaa sheeganaya inuu fursad u helay inuu saxiixo qandaraas labo sano ah oo qaali ah Al-Nassr, kaasoo dalab 5 milyan oo ginni ah oo khadka dhexe ah laga aqbalay, laakiin diidmadiisa inuu baxo wuxuu arkay in heshiiska uu burburay.
Arsenal ayaa waqtigeedu gabaabsi yahay si ay u hesho xiddig iibsan kara Özil. Waxay ku qaateen in badan oo xagaaga ah inay raadiyaan xulashooyin, kooxaha ka dhisan Turkiga iyo xitaa Major League Soccer ayaa loo arkaa inay yihiin kuwa iibsada.
Sida uu xusay David Ornstein oo ka tirsan kooxda Athletic, go'aankii ay Arsenal ku dooneysay inay wax ku iibiso horraantii daaqadda ayaa laga yaabaa inay ka timid xaqiiqda ah in Özil lagu abaalmariyay loyalty 8m oo abaalmarin ah dhammaadkii Sebtember si loogu abaalmariyo joogitaankiisa kooxda, iyo lacag la’aanta Arsenal. jeclaan lahaa in laga fogaado bixinta taas.
Ma jiro wax iibsade ah oo soo baxay isla markaana Arsenal ayaa lagu qasbay inay shell 8milyan ku bixiso, iyo dhabar jabinta aan loo baahnayn ee dhaqaalahooda ayaa si fiican u sharxi karta sababta ay Gunners u baacsatay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Thomas Partey maalintii ugu dambaysay u muuqatay mid waali ah oo lama filaan ah.
Si kastaba ha noqotee, Arsenal ayaa la sheegayaa inay keydineyso lacago 'muhiim ah' iyadoo keepingzil dhinac ka heysata Iyada oo qayb ka ah qandaraaska laacibka reer Jarmal ee ,000 350,000-toddobaadkii, wuxuu ku muteysanayaa lacago qaali ah oo uu ku dheelo muuqaalada, laakiin sida muuqata ma helayo midkoodna xilligan.
Tallaabada xigta ee sheekadan oo dhan waxay noqon doontaa in la arko haddii Mikel Arteta uu doorto inuu includezil ku daro 25-ka ciyaartoy ee Premier League, taasoo ay tahay in la xaqiijiyo 20-ka Oktoobar.
Ku guuldareysiga inuu ka dhigo kooxdaas waxay la micno tahay in fursada kaliya ee Ozil ee kubad weyn uu imaan doono tartamada koobabka, garashadaasna waxay ku qasbi kartaa inuu dib uga fiirsado mowqifkiisa.